Raphael Varane waxa uu soo bandhigay hab-difaacis adag Is-aaragii Real Madrid ay Jimcihii ku garaacday Alaves, kaas oo saddexdii dhibcood ee ay ka heshay ay ugu sii dhowaatay horyaalka oo ay shan dhibcood oo kali ahi ka xigaan.
Difaaca reer France oo warbaahinta la hadlay kaddib guushii Alaves ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay sida kooxdiisu u ciyaartay iyo inay hore ugu sii socdaan horyaalka.
Varane waxa uu ku dooday in dhawaaqyada ka dhanka ah VAR oo gool uu diiday garsoorihii ciyaartu u go’aamisay, in aanay waxba u dhimayn naadigiisa, ayna diiradda sarayaan kaliya sidii ay u guuleysan lahaayeen saddexda ciyaarood ee hadhay.
“Waxaanu diiradda saaraynaa yoolkayaga, waxaana noo hadhay saddex ciyaarood. Waxay ahayd guul muhiim ah, dabcan, laakiin waxa aad muhiim u ah inaanu sii wadno in goolkayagu nadiif ahaado, taas oo kalsooni badan na siinaysa.” Ayuu yidhi Raphael Varane.
25 jirkani waxa uu ballan-qaaday inay sii wadi doonaan niyadda wanaagsan ee ay hayaan, waxaanu caddeeyey in aanay dheg u dhigi doonin dhawaaqyada VAR.
“Waxaanu sii wadaynaa niyadayada wanaagsan. Qaylada bannaanka ka jirta ee naga dhanka ah, nama dhibayso.” Ayuu raaciyey.
Varane ayaa xalay hoggaamiyey khadka difaaca, iyadoo ay maqnaayeen Sergio Ramos, Dani Carvajal iyo Marcelo, waxaanu ka garab ciyaaray Militao oo isfaham ay muujiyeen, halka ay garab siinayeen Lucas Vazquez oo difaaca midig ka ciyaarayay, laakiin dhinaca bidix ayay werwer la’aan ka ahaayeen iyadoo Mendy oo ka ciyaarayay uu rikoodhe u keenay, sidoo kalena noqday laacibkii ugu fiicnaa garoonka.